လူငယ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်ချင်တာအရမ်းများနေရတာလဲ – Live the Dream
“ဖြစ်ချင်တာက အများကြီးပဲ ဘယ်တစ်ခုကို တကယ်ရွေးချယ်ရမှန်းမသိဘူး” ဆိုတာမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ တော်တော်များများ တွေးဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အကုန်လုံးနီးပါးက ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကို ရှာဖွေပြီး အဲဒီနောက်ကို ဇောက်ချလိုက်ဖို့ ပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ကတော့ ဘယ်တစ်ခုကို ရူးရူးမူးမူး ကြိုက်ပါတယ် ရယ်လို့မရှိဘဲ ဟိုဟာလည်းဖြစ်ချင် ဒီဟာလည်းဖြစ်ချင်နဲ့ တစ်ကိုယ်တည်း စိတ်ဖိစီးမှု ကြုံရတဲ့အချိန်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
ဝါသနာများတာက မမှားပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ ပင်ကိုယ်ဗီဇအရ မတူကွဲပြားတဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု၊ ဝါသနာကိုယ်စီလေးတွေ ပါလာတတ်ကြတာ လူတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘဝရဲ့ ရေရှည်ပန်းတိုင် ရွေးချယ်ဖို့နေရာမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ သိပ်များလွန်းနေရင်တော့ ကိုယ့်အောင်မြင်မှုကို အတားအဆီး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာ ဘာကြောင့်များ ဖြစ်ချင်တာတွေက ဒီလောက်တောင် များနေရသလဲ ဆိုတဲ့အချက်ကို ဒီတစ်ခါ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ ဖြစ်ချင်တာတွေ သိပ်များပြီး ဝေခွဲမရဖြစ်တတ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်လည် ဆန်းစစ်တဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူကောင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး အကောင်းဆုံးကို လိုချင်ကြတာချည်းပါပဲ အထူးသဖြင့် ငယ်ငယ်ကတည်းကနေ ပထမ ရဖို့၊ အတော်ဆုံးဖြစ်ဖို့ တွန်းအားပေးခံရတဲ့ တစ်ချို့သောလူငယ်တွေဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။ ကျောင်းစာလည်း တော်ချင် တယ်၊ အားကစားလည်း တော်ချင်တယ်၊ စကားပြောကောင်းတဲ့သူလည်း ဖြစ်ချင်ပြန်တယ်… ပြီးပြည့်စုံသူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ လောဘကြီးမိတာက ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ သိပ်များလွန်းလာခြင်းရဲ့ တရားခံတွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။
မင်မင်လည်း ဒီလိုလောဘကြီးတတ်သူတွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ပါ။ စာအရေးအသား ကောင်းချင်တယ် ဒါ့အပြင်ကို စကားပြောကောင်းတဲ့သူ ဖြစ်ချင်တယ်၊ နည်းပညာနဲ့ ပက်သက်ရင်လည်း တော်ချင်ပြန်တယ်၊ စီးပွားရေးလည်း နားလည်သူဖြစ်ချင်ပြန်ရော… အဲလိုပေါ့ သိပ်လောဘကြီးလွန်းပြီး ပြည့်စုံမှုကို မက်မောမိတော့ ဒါဟာ မင်မင်ရဲ့ လမ်းပျောက်ရာအကြောင်းအရင်း ဖြစ်လာရတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် မင်မင်တို့တွေ လောဘ သိပ်မကြီးမိကြဖို့ လိုပါတယ်နော်။
“အဖိုးတို့ခေတ်တုန်းက အခုလိုရွေးချယ်စရာတွေ မရှိခဲ့ဘူး” ဒါက မင်မင့်အဖိုး ပြောပြနေကျ စကားတစ်ခုပါ။ မှန်ပါတယ် သူတို့ခေတ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ၂၁ ရာစုဆိုတာက အရမ်းကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိပြီး အခွင့်အရေးလည်း များသလို ရွေးစရာတွေလည်း သိပ်များတဲ့ ကာလတစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ နိုင်ငံတကာနဲ့လည်း ချိတ်ဆက်လာနိုင်ပြီ၊ ပညာတွေ ပိုပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သင်ယူနိုင်ကြပြီ၊ အမြင်လည်း ပိုကျယ်လာကြတယ်၊ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တင် အများကြီး လေ့လာလို့ ရနေတဲ့ အခုလိုအချိန်မှာ ရွေးချယ်စရာ အများကြီးရှိနေတာကပဲ တစ်ဖက်ကနေ အခွင့်အရေးဖြစ်သလို တစ်ဖက်ကနေ ဘာရွေးရမှန်းမသိ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ရွေးချယ် စရာတွေ များနေပါစေ… မြင်မြင်သမျှကို စိတ်မယိမ်းယိုင်ဘဲ ကိုယ့်စိတ်ကို မကြာမကြာ ဆန်းစစ်ပေးဖို့၊ မေးခွန်းလေးတွေ မေးပေးဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
၃. Social Media ကြောင့်
အခုခေတ်က နည်းပညာခေတ်… Social Media ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေ သိပ်ကြီးမားနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်တဲ့အပြင် အထူးသဖြင့် လူငယ်တစ်ချို့တွေဆိုရင် Social Media ကိုပဲ တကယ့်ဘဝကြီးတစ်ခုလို ထင်မှတ်နေကြသူတွေ ရှိပါတယ်။ ဟန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ Social Media ပေါ်မှာ တခြားသူရဲ့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဘဝ၊ အောင်မြင်နေတာကို ကြည့်ပြီး သူတို့ကို အားကျတဲ့စိတ်တွေက ကျွန်တော်တို့ကို လွှမ်းမိုးသွားတတ်ပါတယ်။ မင်မင်လည်း မကြာမကြာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်… သူတို့တွေကိုကြည့်ပြီး ငါလည်း ဒီလိုကြိုးစားလိုက်ရင် ဒီလိုအောင်မြင်လာမှာပဲ၊ ဒီတစ်ခုကိုလုပ်ရင် ဒီလိုဖြစ်လာမှာပဲ ဆိုပြီး စိတ်ကူးတွေ ယဉ်ရင်းနဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့စာရင်းတွေက ပိုပိုတိုးလာလေလေ ကိုယ်တိုင်က လမ်းပျောက်လေလေပါ။ ဒါကြောင့် မင်မင်တို့ဟာ လက်တွေ့ဘဝကို မြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်၊ စစ်မှန်တဲ့ မိမိ၊ စစ်မှန်တဲ့ ဝါသနာ၊ စစ်မှန်တဲ့ ပန်းတိုင်ကိုပေါ့။ သူများကို အားကျပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှိုင်းယှဉ်နေသ၍တော့ ကိုယ်ဟာဆန္ဒပဲရှိပြီး တကယ် အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။
၄. အပေါင်းအသင်းနဲ့ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်း
မင်မင်တို့ရဲ့ ဆန္ဒတွေ၊ လိုချင်မက်မောမှုတွေဟာ အပေါင်းအသင်းနဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် တက္ကသိုလ်မေဂျာရွေးတာတောင် သူငယ်ချင်းတက်လို့ လိုက်တက်တာ ဆိုတာမျိုး ရှိသေးတာပဲ မဟုတ်လား။ အပေါင်းအသင်းကို ခုံမင်တတ်တဲ့ လူငယ်သဘာဝအလျောက် အရမ်းခင်မင်တွယ်တာတတ်သလို စိတ်တိမ်းညွှတ်ဖို့လည်း လွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေပြောနေကြတာ၊ လုပ်နေကြတာတွေကို ကြည့်ပြီး ငါလည်းဖြစ်ချင်တယ်၊ လုပ်မယ် ဆိုပြီး စိတ်အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နေရင်းနဲ့ပဲ တကယ်ဖြစ်ချင်တာကို မသိတော့ဘူး ဖြစ်ရတာပါ။
နောက်တစ်ချက်က ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်လည်း တစ်နည်းတစ်ဖုံ မူတည်တတ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်း အများစုက ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်အသက်အရွယ်မှာတော့ ဘာဖြစ်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထား တတ်ကြပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေကို ဂရုစိုက်နေမိရင်း ကျွန်တော်တို့တွေဟာ သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ ပုံစံမျိုးလည်း ကြိုးစားကြတယ်၊ တစ်ဖက်ကနေ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေလည်း ရှိနေပြန်တယ်၊ အဲလိုကနေ အလိုမကျ ဖြစ်ရင်းနဲ့ ကျင်လည်နေမိတာက တခြားဖြစ်သွားပြီး သံသရာလည်ရတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ အပေါင်းအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ့အတွက်မှ အသက်မရှင်ဘဲ ကိုယ့်အတွက် အသက်ရှင်ပြီး ကိုယ်ပျော်ရွှင်ရာကို အာရုံစိုက်ပေးပါနော်။
ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေမှာ စူးစမ်းလိုစိတ်သိပ်များတာကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ အသစ်အဆန်းတစ်ခု တွေ့လို့ စိတ်ဝင်စားသွားပြန်ပြီ၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအလုပ်ကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာပဲ၊ ဟိုအလုပ်လေးလည်း မိုက်တာပဲ စမ်းကြည့်ရင်ကောင်းမလား၊ ဒီအလုပ်လည်း မဆိုးဘူး လေ့လာကြည့်ရင် ကောင်းမလားနဲ့ စူးစမ်း လေ့လာတတ်တာ ကောင်းပေမယ့်လည်း စိတ်တွေထွေပြားပြီး ဒီတစ်ခု ရွေးရနိုးနိုး၊ ဟိုတစ်ခု ရွေးရနိုးနိုးနဲ့ ဖြစ်တတ်တာကိုတော့ သတိပြုမိဖို့ လိုပါတယ်။ ဟိုစမ်း ဒီစမ်းနဲ့ဘဲ အကုန်လုံး ကြိုက်တယ်၊ အကုန်လုံး ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ဖြစ်တတ်တာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ယာယီစူးစမ်းလိုစိတ်၊ စိတ်ဝင်စားမှုကို နားလည်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်နော်။
လူတိုင်းရဲ့ ပန်းတိုင်က ကွာခြားပါတယ် ဒါပေမယ့် အကျိုးအမြတ်တစ်ခုတည်း ကြည့်တာတော့ သိပ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့။ မင်မင်ဆိုလည်း အရင်ကအဲလိုပဲ ကိုယ်က ပိုက်ဆံကိုပဲ အာရုံထားနေတဲ့အခါ ပိုက်ဆံ များများရမယ့် အလုပ်မှန်သမျှက ကိုယ့်ပစ်မှတ်လိုမျိုး ဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။ ဟိုဟာလည်း လုပ်ရမယ် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှာရမယ်၊ အဲဒီကနေတစ်ဆင့် ဘာလုပ်မယ် ဆိုပြီး ဖြစ်ချင်တာတွေ၊ လုပ်ချင်တာတွေနဲ့ လောပြီး ဘယ်တော့မှ ကိုယ်စီစဉ်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးပေါ့လေ။ ပြီးတော့ ပိုက်ဆံ တစ်ခုတည်းကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဆိုတော့ အမှားအယွင်းဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်း အများကြီးပဲ။ အခုလည်း မင်မင့်အတွက် ပိုက်ဆံက အရေးမကြီးဘူးလားဆိုတော့ အဲလိုလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး၊ အရေးကြီးပါတယ် ဒါပေမယ့် အကျိုးအမြတ်တစ်ခုတည်းကို ကြည့်တာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှု၊ အားသာချက်တွေ၊ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ ရေရှည် အဲလိုမျိုး ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေ စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ ဘယ်ဟာကတော့ ဖြစ်သင့်တယ်၊ ဘယ်ဟာကိုတော့ ဦးစားပေးသင့်တယ် ဆိုတာမျိုး ခွဲခြားတတ်သွားတယ်လေ။ ဖြစ်ချင်တာတွေ အစုလိုက် အပြုံလိုက်ကြီး ဖြစ်မနေတော့ဘူးပေါ့။